China XZWD slewing inobereka yeAWP (yemuchadenga basa chikuva) fekitori uye vagadziri | Wanda
XZWD slewing inobereka yeAWP (yemuchadenga basa chikuva)
Kubhejera kwekusona kunoshandiswa zvakanyanya kune epuraneti basa chikuva Nekuti iyo yemuchadenga basa chikuva ine lightweight uye compact size, iyo slewing inotakura inowanzo shandisa 200 ~ 1000 mm diki saizi mamodheru.
Iyo slewing inobereka zvinhu inogona kushandiswa 50Mn kana 42CrMo, mhando kunyanya ndeye 4 poindi yekubata bhora slewing inobereka.
Iyo saiti yebasa remuchadenga yakareruka uye compact saizi inoita kuti zvive nyore kushandisa muzvikoro, machechi, matura uye nezvimwe. Iwo mapuratifomu ebasa remuchadenga anopawo mhinduro dzemabasa emukati pane makuru masiteji ekuvaka, senge kukwira kwakakwira, pamwe nekuve akakwana kune mashoma-emabasa ekuvaka.
Nzvimbo yemuchadenga yebasa inowanzo shandiswa slewing kubereka, uye iyo yekumberi uye yekudzosera madhairekitori inogona kusarudzwa zvinoenderana nezvinodiwa zvebasa. Chikamu chekucheka chemuchina wekucheka uye chikuva chebasa zvese zvakaiswa pane rutsigiro rwekucheka, ndokuti iyo turntable. Chishandiso chekutyaira chakasungirirwa pane iyo turntable, uye giya rekutyaira rakaiswa kumucheto wepazasi. Iyoslewing kuberekaInoumbwa neyakagadziriswa uye chindori giya chigaro chakamiswa chakabatana nefuremu. Iyo slewing mashandiro ine turntable, cycloid hydraulic mota, honye giya rinodzora, rutsigiro rwekucheka, uye pinion giya. Iyo yekunze giya mhete yekutakura inosimudza yakagadzika pane chassis, uye yemukati mhete yakabatana neiyo turntable. Iko kutenderera kweiyo cycloidal mota inofambisa kutenderera kwehonye giya rinodzora, kutenderera kweiyo honye giya inotyaira iyo pinion giya yakabatana nayo, uye kutenderera kweiyo turntable kunoonekwa nekubatanidzwa kweiyo pinion giya uye yekunze mhete giya.
Pashure: XZWD | Lightweight slewing bearings for kurongedza muchina
Zvadaro: Concrete Kusanganisa Pump Rori Inoshandiswa Slewing Ring Kubereka
AWP slewing inobereka
slewing kubereka kwemuchadenga basa chikuva
slewing kubereka kweAWP